काठमाडाैं | जेठ २७, २०७७
नवाफी रवाफी कवाफी छ नेता,
विलासी गिलासी सुवासी विजेता ।
प्रजातन्त्रको ढ्वाङ रित्तो करायो,
जमाना अनौठो नयाँ आज आयो
– महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा
कुनै बेला देवकोटाले लेखेको पंक्ति अहिले झनै सार्थक भएको छ । म ‘भिगन’ भएकाले माछामासु, दुग्धजन्य पदार्थ र जनावरबाट आएको कुनै पनि उत्पादन प्रयोग गर्दिनँ । जसले खान्छ, प्रयोग गर्छ त्यसलाई म घृणा पनि गर्दिनँ ।
सकभर मासुजन्य पदार्थ नखानू, कम खानू वा खानै पर्ने भए आफ्नै देशमा उत्पादन भएको मात्र खानू । मेरो यो आलेखमा आएको अभिव्यक्ति भिगन परिप्रेक्ष्यमा आधारित छ ।
गुन्द्रुक खाने पनि कहाँ कम छौं र ? आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १ अर्ब २१ करोड ९२ लाख ७० हजार रुपैयाँ बराबरको गुन्द्रुक आयात गरेर पनि खाएकै हो । त्यति मात्रै कहाँ हो र ? सुपारी, ल्वाङ, सुकमेल पनि भारतबाटै आएको खाइयो । त्यसपछि खाएको मासु अपच हुन्छ कि भनेर भारतबाटै आउने हजमोला पनि खाइयो । मासु पचेपछि बाँकी कामका लागि ट्वाइलेटमा भारतमै बनेको कमोटमा बसरे भारतबाटै आएको ट्वाइलेट पेपरले आची पनि पुछियो ।
आजकलको फिल्म हेरेर घर फर्केपछि रोमान्टिक मूडलाई लगाम लगाउन त सक्ने कुरा भएन । त्यसैले १३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बराबरको आयातित कण्डम प्रयोग गरेर रोमान्टिक मूडलाई तृप्त पनि पारियो । जसले कण्डम प्रयोग गरेन, उसले फेरि ९ महिनापछि बच्चाका लागि ४ अर्ब ६६ करोड बराबरको आयातित खाना र दूधलाई नकार्न पनि सक्ने भएन ।
बिहान पकाएको मासु टन्न खाएपछि सोफामा लम्पसार पल्टिएर राष्ट्रवादको नाममा प्रशान्त तामाङ, अर्थर गन अरू थुप्रैलाई पटक–पटक भोट हालेर आफूलाई नेपाली हुँ भनेर चिनाउन पनि पछि परिएन तर जनकपुरमा बस्ने तराईबासी, जसले पुस्तौंदेखि आफ्ने देशमा खेतीकिसानी गर्दै केही हदसम्म भए पनि भारतीय आयात रोक्ने कोसिस गरिरहेको छ, उसलाई कहिल्यै पनि नेपाली हो भनेर मनले स्वीकार गर्न सकिएन ।
भारतबाट आयातित रङलाई चिनियाँ पिच्कारीमा हालेर फागु पूर्णिमामा पिच्कारी पनि हानेकै छौं । गुट्खा, पानपराग जस्ता अरू वस्तुको त कुरै नगरौं, बर्सेनि डेढ अर्बको मसला, ११ करोडको फूल आयात गरेर तिहार पनि मनाइरहेकै छौं । मरेर दाहसंस्कार गर्दा पनि करीब १ अर्ब बराबरको धूप भारतबाट आयात गरेर पनि प्रयोग गरिरहेकै छौं ।
यी त केवल थोरै उदाहरण मात्र हुन् । वाह ! कस्तो विलासी जीवनशैली छ हाम्रो ! होइन त ? यही हो हामी नेपालीको तीतो यथार्थ । जसलाई हामीले मिठोसँग लिइरहेका छौं ।
त्यसपछि राष्ट्रियताको भूत सवार भयो हामीलाई अनि नेपाली टोपी लगाएर नेपाली झण्डासहित भारतीय विस्तारवाद मुर्दावाद भनेर फेसबूकमा स्टेट्स हालेपछि हामी नेपालीलाई कसले छुने ? दुःख लाग्छ तर यही हो हाम्रो राष्ट्रियता । आत्मनिर्भर हुन नसक्नेले राष्ट्रियता कुरा छाडिदिए हुन्छ । यस्तो राष्ट्रवाद खोक्रो आडम्बर र ढोङभन्दा बाहेक केही होइन ।
भारतसँग लड्न हातहतियारको नाममा खुकुरीको के कुरा ? हामीसँग हँसिया पनि छैन (भए पनि भारतबाटै आयातित नै होला) । तै पनि भारतपछि हट (गो अफ इन्डिया) भनेर खुकुरी देखाउँदै टिकटक भिडियो बनाउन हामी पछि परेनौं ।
मैले बुझेको गुलामीको परिभाषा अलि फरक छ । नेपाल कहिल्लै गुलाम बनेन तर नेपालीहरू आफ्नै देशमै गुलाम (आर्थिक गुलाम, सांस्कृतिक गुलाम) भए विदेशीहरूबाट र जो देशमा छैनन् उनीहरू संसारभर गुलामी गर्न जान बाध्य भए । हामी जन्मनु अघिदेखि मृत्यु संस्कार हुँदै श्राद्ध गर्दा पनि पनि हामी अरूमा निर्भर छौं । जुन देशका मानिसहरू जन्मनु अघिदेखि मर्दासम्म कसैको भर पर्छन् भने यसलाई गुलामी नभने के भन्ने ? यो परिस्थिति सिर्जना हुनुमा हामी हरेक नेपाली जिम्मेवार छौं ।
आफूलाई चाहिने आवश्यक चिज पनि उब्जाएर वा उत्पादन गरेर खान नसक्ने हामी नेपाली नागरिक अझै स्वाभिमान, समृद्धि र राष्ट्रियताको कुरा गर्छौं । तपाईंलाई राष्ट्रको चिन्ता छ र समाजको समृद्धि चाहनुहुन्छ भने आचरण र जीवनशैली समाजलाई सही दिशामा लाने खालको बनाउनुहोस् । यदि बानी, व्यवहार, आचरण र जीवनशैली परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न भने, मुख बन्द गर्नुहोस्, कलम चलाउन छोड्नुहोस् ।
विश्वव्यापीकरणको युगमा सबै कुरा आफैंले उत्पादन गर्न पनि सकिन्न, जुन आर्थिक रुपमा व्यावहारिक पनि छैन । आयात–निर्यात विश्वव्यापी सत्य कुरा हो । यसलाई पूर्णतया नकार्न पनि सकिन्न । अरू देशको संगीत सुन्नु हुन्न, फिल्म हेर्नु हुन्न भन्ने पनि होइन तर आफ्नो संस्कृति, सामाजिक मूल्यमान्यता र अर्थ व्यवस्थालाई धरासायी बनाएर अरूलाई पोस्ने काम पनि त गर्नुभएन । पहिचान झण्डा, टोपी, सगरमाथा, बुद्धमा होइन, आत्मानिर्भरतासँग गाँसिएको हुन्छ ।
सरकार बन्ला, विघटन होला, व्यवस्था परिवर्तन होला तर समाज यही तरिकाले गइरह्यो भने कहिल्यै परिवर्तन हुनेछैन । जीवन जिउने २ तरिका छन्, जो भइरहेका छन्, तिनलाई हुन दिनुहोस् र चुपचाप हेरेर/सहेर बस्नुहोस् वा चित्त बुझ्दैन भने त्यसलाई बदल्नका निम्ति आफ्नो ठाउँबाट आफूले गर्न सकिने जिम्मेवारी लिनुहोस् ।